Mareykanka: Xeer cusub oo lagu xakameynayo hubka
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo Xeer-ilaaliyaha Qaranka Merrick Garland ayaa lagu wadaa in Khamiista maanta ah magaalada Washington kaga dhawaaqaan xeer cusub oo uu Aqalka Cad ku rabo inuu ku xakameyo hubka gacmaha ugu jira qaar ka mid ah shacabka Mareykanka.
War hordhac ah oo kasoo baxay Aqalka Cad ayaa lagu sheegay, in madaxweynaha uu bartilmaameedsan doono hubka loo yaqaano “Qoryo-Cirfiidka” ee aanan laheyn tirooyinka aqoonsiga ee lagu ogaado qofka iibsaday iyo dukaanka laga soo gaday.
Ciidanka amniga ayay ku adkaataa in ay ogaadaan asalka qoriga marka ay baarayaan danbiyada la xiriira weerarada loo adeegsado hubkaas.
Waaxda Caddaaladda Mareykanka ayaa sidoo kale maanta ku dhawaaqi doonta sharci qoysaska ama ciidanka amniga u ogolaanaya in ay maxkamad weydiistaan, hubka dhigis lagu sameeyo xubnaha qosyka qaar, haddii loo arko in ay khatar ku yihiin naftooda iyo dadka kale.
Xeerarkaan cusub ayaanan u baahneyn in la horgeeyo Koongareeska. Waxaa lagu wadaa in ay ku dhaqangalaan dikareeto madaxweyne.